Borussia Dortmund oo go’aamisay qiimaha ay kaga iibineyso Jadon Sancho kooxaha Real Madrid iyo Liverpool – Gool FM
Dajiye November 15, 2019
(Borussia) 15 Nof 2019. Sida ay shaaca ka qaadeen wargeysyada gudaha dalka Germany kooxda Borussia Dortmund ayaa go’aamisay qiimaha ay dooneyso inay ku iibiso xiddigeeda da’ada yar ee Jadon Sancho, maadaama ay xiiseenayaan qaar ka mid ah kooxaha waaweyn ee Yurub.
Kooxaha Real Madrid, Liverpool iyo Manchester United ayaa ah kuwa sida aadka ah u xiiseynaya helitaanka saxiixa da’ayarkan.
Jadon Sancho ayaa soo jiidatay dareenka dhamaan kooxaha waaweyn, kaddib qaab ciyaareedka weyn uu soo bandhigay dhawaantan.
Haddaba wargeyska “Bild” ee dalka Germany ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kooxda Borussia Dortmund ay ka go’an tahay inay hesho lacagta ugu badan ee suurtagalka ah si ay u iibiso Jadon Sancho.
Kooxda reer Germany ee Borussia Dortmund ayaa waxay go’aamisay in qiimo gaarsiisan 120 milyan ginni ay ku iibiso xiddigeeda da’ada yar ee reer Germany.
Sida laga soo xigtay wargeyska caanka ah ee “Bild” kooxda Borussia Dortmund ayaa u aragto Jadon Sancho inuu yahay qof karti leh ee ka sarreeya Ousmane Dembélé, kaasoo ay kaga iibiyeen sanadkii 2017 qiimo dhan 96.8 milyan ginni naadiga Barcelona.